UK/Russia: Moskow oo markeeda cayrisay 23 Dibolomaasi oo British ah – Kasmo Newspaper
Updated - March 17, 2018 1:59 pm GMT
London (Kasmo), Go’aankii London ka dib waxaa,sidii lafilayay, timid jawaabtii Moskow. Russiya waxay ku caddeysay ‘Persona non Grata’ 23 Dibolomaasi oo British ah kuwaas oo loo qabtay muddo toddobaad ah in ay dalkeeda uga baxaan.
Tillaabadan ayaa u dhiganta middii Britain ka qaadday, aargoosi ahaan, sumayntii basaaskii hore Sergei Skripal, horraantii bishaan March. Moskow waxay caddeysay in ay xaq u leedahay qaadista tillaabo kasta oo xayiraad ah, haddii go’aan kale oo cadaawad ku dhisan ka yimaado dhanka London.
Russiya waxaa kale oo ay la noqotay oggolaanshihii lagu furi lahaa Qunsuliyadda Britain ee St. Petersburg, go’aammadaasna waxaa saaka oo Sabti ah, 17 March, loo gudbiyay Safiirka Uk u fadhiya Moskow, Laurie Bristow, oo looga yeeray Wsaaradda Arrimaha Dibadda.
Si kasta ha ahaatee, Ergeyga Russiya ee Ha’adda Mamnuucista hubka Kiimikada, Alexander Shulgin, wuxuu caddeeyay in ay ‘suuragal tahay walxihii kiimikada ahaa ee loo adeegsaday Salisbury in ay ka soo jeedaan Shaybaarro reer Galbeed ah.
Halkaas oo si buuxda loogu farsameeyay walxahaas, sida ku cad qoraallo madaxbannaan oo sahal loo heli karo’. Wuuna ku soo gabagabeeyay isaga oo farta ku fiiqay in dalalkaasi yihiin Britain qudheeda iyo Maraykanka.
Sergei Skripal oo horey u ahaa G/Sare ka tirsan Sirdoonka Militariga Ruushka waxaa la qabtay sannadkii 2006, waxaana lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah ka dib markii lagu eedeeyay in uu la xiriiray Sirdoonka MI6 ee Britain, isaga oo u kashifay haybta xubnaha Sirdoonka Ruushka ee qarsoodiga uga hawlgala Uk oo uu ku beddeshay £100,000 oo Gini.
Skripal wuxuu la shaqaynayay MI6 intii u dhaxaysay 1995 ilaa 1999 oo ahayd markii uu hawlgabka galay, laakiin wuxuu sii waday in uu Britain u gudbiyo hadba wixii macluumaad iyo dokumenti ah oo gacantiisa soo gala.
Sannadkii 2010 barnaamij la iku dhaafsanayay basaasiinta, qolaba qolada kale, oo dhexmaray Moskow iyo Washington ayaa Madaxweyne Dimitri Vedvedev ugu fidiyay cafis, wuxuuna intaa ka dib u soo guuray Britain oo uu kula noolaa qoyskiisa.